Faravohitra sy ny manodidina :: Mbola mitaraina ho tsy mahazo rano ireo mponina • AoRaha
Faravohitra sy ny manodidina Mbola mitaraina ho tsy mahazo rano ireo mponina
Velon-taraina hatrany ireo mponina eny Faravohitra, Ambondrona Ambony, Andohalo sy ny manodidina fa mbola tsy miverina ny famatsiana rano. Namoaka fanambaràna ny avy ao amin’ny orinasa Jirama, afak’omaly, fa efa mizotra tsara ny famatsiana rano fisotro madio teny Ambondrona Ambony- Faravohitra- Ambatobevanja- Andohalo- Andafiavaratra- Avaradrova- Ambohimitsimbina- Andohamandry- Ambohi­potsy- Amboninampamarinana ary Ambatovinaky. Tokony hivaha amin’ity herinandro ity ny olana, hoy ny Jirama.
“Toa mampandry adrisa fotsiny ny Jirama. Tsy misy rano miverina amin’ny laoniny izany ety aminay. Tapaka amin’ny 5 ora maraina ny rano ary amin’ny 12 ora alina vao mandeha indray”, hoy ny renim-pianakaviana monina eny Faravohitra. Tsiahivina fa nametrahana fantsona hisintona rano teo Andohalo mba hamatsy an’i Faravohitra sy Ambondrona Ambony.
An-daniny, nitaraina ihany koa ny teny Andohalo, Amba­tovinaky ary Ambatonakanga fa misy fian­traikany amin’ny famatsiana rano eny amin’izy ireo io fisintonana rano io.
“Manjary tsy misy rano intsony aty aminay”, hoy ny mponina eny Andohalo. Nitondra fanazavana kosa ny avy ao amin’ny orinasa Jirama fa mbola mandeha tsikelikely ny rano. Manao fifampifandanjana ny fitsinjarana izy ireo, amin’izao